Raad Raac News Online – Gaas oo si dhuumasho ah Puntland uga baxay si uusan u Saamayn go’aankii joojinta Farmaajo
Gaas oo si dhuumasho ah Puntland uga baxay si uusan u Saamayn go’aankii joojinta Farmaajo
Faarax February 16, 2017 Comments Off on Gaas oo si dhuumasho ah Puntland uga baxay si uusan u Saamayn go’aankii joojinta Farmaajo
Raad Raac Dubai: Madaxweynaha Puntland Cabdi weli Gaas ayaa safar aan laga warqabin ugu baxay Dubai xilli amaan darro iyo abaaro ay ka jiraan Puntland.
Lama oga sababta rasmiga ah ee safarkiisa iyadoo wararka qaar ay sheegayaan inuu qarsoodiga u door biday cabsi uu ka qabo hogaamiyaha cusub ee DF oo sida sharcigu yahay an fasax iyagoon ka haysan aan ka bixi karin gudaha dalka ama aan dhinqc ordi karin dowladda dhexe sidii caadada ahan jirtay dalka iyo dadkana sumcad xumo dhaxalsiisay.
Shacabka PL ayaa isweydiinaya sababaha Madaxweynahooda ku kalifay in uu dhuunto oo mudda ka badan 20 saac ay ogadaan in Madaxweynihii tagay taaso aan horay looga baran.
Waxaa muuqata in Gaas uu billaabay ducfaruurka qaranimada Somaaliya xilli uu fashil kala kulmay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya oo dawlado ajanabiya isagoo u adeegaya uu tageerayey qaar ka mid ah musharaxiintii guuldaraystay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in tani uu kaga hortagayo culayska ka haysta dhanka barlamaanka ee ay kamid tahay safaro bilaa natiijo ah oo ku baxa kharash aad u badan in uu sannad kasta dhoofo Madaxweynaha PL Dr Gaas.
Ilo ku dhow Madaxtooyada ayaa Raad Raac News u sheegay in qorshaha safarka uu ahaa labo cisho oo qarsoodi ah.